300 oo qof oo ku nool Hawassa ayaa sheegay in aan wax magdhow ah la siin muddo saddex sano ah | Addis Maleda
መነሻ ገጽSoomaaliWararka Abol300 oo qof oo ku nool Hawassa ayaa sheegay in aan wax...
In ka badan 300 oo qof oo degan xaafadda Chefe ee magaalada Hawassa ee dowlad deegaanka Sidama ayaa sheegay in aan wax magdhow ah la siin muddo saddex sano ah.
Dadka deegaanka ayaa saaka u sheegay Addis Ababa in Hay’adda Waddooyinka Federaalka ay ku qiyaastay in ka badan 300 oo qof in lagu qiimeeyay dhismaha Waddada isku xirta Mojo-Hawassa ee ku taalla deegaanka Chefe ee magaalada Hawassa ee Deegaanka Sidama.
Sida ay Hay’addu sheegtay, qof kasta waxa lagu qiyaasaa 200,000 oo Birr ama ka badan dhulka. Hase-yeeshee, waxa uu sheegay in loo jiiday Miisaaniyadda oo aan la soo saarin, isla markaana loo sheegay in Hay’adda Waddooyinka Itoobiya la siin doono inta lagu jiro qoondaynta Miisaaniyadda, balse ilaa 11-kii bishii May ee sannadkii 2014-kii ma aanu helin xogtaas.
Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in qaar kamid ah dhulalka lagala wareegay aysan wali dhismin, hadii aysan ka faa’ideysan kaabayaasha dhaqaalaha dib loogu celin doono, balse loo sheegay in si tartiib tartiib ah loo isticmaali doono.
Dadka cabanaya ayaa ka dalbaday Hay’adda Wadooyinka Itoobiya in ay soo celiso dhulkii ay ku qiyaastay dhismaha Waddada Mojo Hawassa haddii aysan si buuxda u isticmaalin ama aysan bixin lacagta lagu qiyaasay.
Samson Wondimu oo ah Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha ee wasarada Waddooyinka Itoobiya ayaa isna dhankiisa sheegay in lacagtan la bixin doono marka ay degmooyinku diyaariyaan oo ay u soo gudbiyaan xogta la xidhiidha dhismaha dhulka iyo wadada.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu sheegay in hadii cabashadaasi ay run tahay, islamarkaana cabashada lagala tashado dhinacyada ay khuseyso ay fududeyn doonto.
Wuxuu intaas ku daray in si la mid ah ay jiraan shaqsiyaad ku sugan meelo kala duwan oo dalka Itoobiya ah oo dib u dhac ku yimid culeys dhanka miisaaniyadda ah, sidoo kale waxaa ka cabanaya shaqsiyaad aan xaq u lahayn qiyaas dhul iyo mid dhul toona.
Wadada isku xirta Modjo-Batu (Zeway) oo qeyb ka ah mashruuca wadada Mojo Hawassa ayaa si buuxda dib loo furay waxaana la furay 10-kii September 2014.
Waddadan ayaa dhererkeedu dhan yahay 92 KM, waxaana la dhamaystiray shan ka mid ah xarumaha canshuuraha.
Goobaha lacag bixinta ayaa la sheegay inay yihiin Mojo, Koka, Botte, Meki iyo Batu.
Waxa la og yahay in shantii goobood ee lacagta lagu bixin jiray la dhamaystiray, isla markaana la dhamaystiray dhismayaalkii shaqaynayey iyo qolalka jiifka ee shaqaalaha, garaashyada, tignoolajiyada badbaadada gaadiidka iyo daboolka lacag bixinta.
Previous articleአፋር ከሰብዓዊ ቀውስ እስከ “ጦርነት በቃን”
Next articleIskaashatooyinka gobolka ayaa lagu wadaa inay bedelaan kuwa iibiya sibidhka
Shatiyo ganacsi oo wata aqoonsiyo been abuur ah ayaa la sheegay inay caqabad weyn ku yihiin